Tsindrona koronosy Service Manufacturer - CBPMM
Inona no atao hoe tsindrona koronosy
Tsindrona koronosy dia dingana orinasa mpamokatra entana izay mety tsara ho an'ny famokarana mitovy sy tena miovaova vokatra amin'ny ampahany dia be.
Ny tsindrona koronosy orinasa dia mitombo haingana sy tamin'ny 2016, ny eran-tsindrona koronosy orinasa dia vinavinaina ho ampy ho tombany amin'ny USD 283,54 arivo tapitrisa.
Polypropylene no be mpampiasa indrindra akora nampamoahana an'i 36% ny fitambaran'ny fangatahana, nanaraka ny ABS amin'ny 25% tinady tamin'ny 2016.
Ny Asia Pacific Nanjakazaka tamin'ny namany ny eran-fangatahana ho an'ny tsindrona novolavolaina vokatra sy Nahazo 37% ny fitambaran'ny fangatahana tamin'ny 2016.
Maro ny vokatra izay matetika ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro dia vokarina mampiasa ny fampidirana dingana koronosy. Tsindrona koronosy dia mety tsara ho an'ny dingana famokarana mahazo vokatra avo-tsara amin'ny tena vola-tahan'ny mahomby.
Tombony ny tsindrona koronosy
Tsindrona koronosy orinasa mitombo exponentially. Tsindrona koronosy dia midika hoe hatrany ampiasaina ao amin'ny famokarana ny vokatra maro.
Ny dingana orinasa mpamokatra entana dia manana tombony maro ny fomba hafa. Ny sasany manan-danja indrindra tombontsoa amin'ny fampiasana tsindrona koronosy ho an'ny orinasa mpamokatra entana entana dia toy izao manaraka izao:
Injection molding is a very mahomby manufacturing process. The process is highly mandeha ho azy and controlled by robotics and machines which can be very easily controlled and managed by an operator.
Due to the highly consistent manufacturing process, it is much easier to ensure consistency in products and brands. Injection molding provides an almost diso-maimaim-poanaorinasa mpamokatra entana dingana.
Ny kalitao ny vokatra soa hafa ny tsindrona koronosy. Ny vokatra vokarina dia maivana sy mateza.
Vokatra vokarina fampiasana tsindrona koronosy tsy miray na welded, fa izy ireo dia natao iray lasitra avy. Izany dia mampitombo ny fiantraikan'ny-fanoherana sy tensile hery ny vokatra.
Orinasa mpamokatra entana mampiasa tsindrona koronosy dia tena vola lany-mahomby. Ny ampahany lehibe indrindra amin'ny fandaniana sy ny loharanon-karena dia lany ringana ny vokatra nandritra ny planina sy ny planina ny famokarana lasitra.
Raha vao ny vokatra sy ny lasitra efa natao, ny orinasa mpamokatra entana dingana tena haingana. Be dia be ny vokatra azo vokarina amin'ny tena kely kokoa ny fotoana mampiasa lasitra mitovy foana.
However, injection molding provides the flexibility to manufacture products using a fitambaran'ny of plastic polymers. They can select the best combination of raw materials which will provide them with the desired quality of the product based on its intended use.
Tsindrona koronosy dingana efa niova sy nivoatra be rehefa mandeha ny fotoana. Ny orinasa dia lasa Eco-friendlier sy maharitra . Ny vokatra farany dingana mitarika ho amin'ny tsy tena tamy plastika nandritra ny famokarana.
Ny vaovao ihany koa ny milina be sy mampiasa angovo mahomby, fara fahakeliny, 20-50% latsaka ny angovo noho ny milina be taona.
Fampiharana for Common tsindrona koronosy
Tsindrona koronosy no ho ampiasaina amin'ny mpanamboatra vokatra maro izay fampiasa amin'ny antsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny vokatra vokarina amin'ny alalan'ny tsindrona koronosy dia ny toetra tsara indrindra, tsy miovaova, ary tena mateza.
Ny sasany amin'ireo fahita indrindra fampiharana ny tsindrona koronosy ireo hevitra eto ambany:
Medical fitaovana ireo dia hatrany vokarina mampiasa ny fampidirana dingana koronosy. Ny fitaovana ara-pitsaboana orinasa mpamokatra entana orinasa mampiasa tsindrona koronosy mitombo hatrany amin'ny 6% isan-taona.
Tamin'ny 2012, mihoatra ny 755 tapitrisa kilao ny plastika dia levona noho ny mpanamboatra fitaovana ara-pitsaboana sy ny fitaovana mampiasa tsindrona koronosy. Ny vokatra vokarina dia avo dia avo ny tsara, marina, ka atero nohatsaraina fampisehoana.
Ny vokatra dia tsy vokarina ao amin'ny tena vidiny izay dia ahafahana hivarotra taminy, araka mampiasa sy tsy reusing aminy, Rehefa afaka hiteraka. Izany mampihena ny mety ho aretina sy ny fanomanana ny fotoana ny fitaovana.
Tsindrona koronosy no tena ampiasaina matetika faran'izay tsara mpanamboatra fiara faritra. Tombanana ho ny 90% ny faritra ampiasaina amin'ny fiara no vokarina mampiasa tsindrona koronosy.
Ny fampidirana dingana koronosy manampy ny mpanamboatra faritra avo-tsara izay tena marina sy tsy tapaka izay no tena zava-dehibe ho an'ny orinasa ny fiantohana fiara fiarovana.
Ireo toko ireo koa dia maivana izay manampy ny fahaiza-miasa mahomby hanatsarana solika. Ny tapany mahery dia mahery sy mateza izay Manatsara ny ankapobeny fiarovana ny mpandeha.
Ampiasao Daily Products
Maro tamin'ireo entana fampiasa ampiasaina eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia vokarina mampiasa tsindrona koronosy. Products toy ny tavoahangy plastika, plastika kaontenera, kilalao, etc. fanaka dia vokarina ny fampidirana dingana koronosy.
Ny vokatra vokarina dia maivana, mateza, sy ny fiantraikan'ny-mahatohitra izay miantoka ny ho ela velona. Ny fampiharana ny tsindrona koronosy eo amin'ny mpanamboatra vokatra ampiasaina isan'andro dia mitombo hatrany.
Consumables sy ny Electronics
Ny consumables sy ny zavatra elektronika ampiasaina matetika ihany koa vokarina betsaka mampiasa ny fampidirana teknolojia koronosy.
Electronic vokatra sy ny Accessories toy ny finday, finday Accessories toy ny casings, earphones, takelaka fonony, fakan-tsary vatana, fanaraha-maso lavitra, elektronika faritra ho an'ny fahita lavitra sy ny ordinatera sns no vokarina mampiasa tsindrona koronosy.
Ireo vokatra azo vokarina amin'ny ampahany amin'ny avo tsy tapaka amin'ny alalan'ny tsindrona koronosy. Noho ny manovaova amin 'ny fifidianana ny fitambaran'ny plastika ho an'ny famokarana, ireo vokatra mahery dia mahery sy mateza.
Fonosana dia iray amin'ireo fahita indrindra fampiharana ny tsindrona koronosy. Ny fonosana ampiasaina ho an'ny sakafo sy ny sakafo tsy dia zavatra vokarina mampiasa tsindrona koronosy.
Ny fonosana mitandrina ny vokatra azo antoka sy manimba afaka mandritra ny fitaterana. Tamin'ny 2016, dia ny lohan'ny fonosana tsindrona koronosy fampiharana tanteraka tamin'ny fitakiana ny 43.385 kilotons .
Tsindrona koronosy malalaka fampiharana mahita ao amin'ny orinasa mpamokatra entana ny vokatra mifandraika amin'ny fanorenana sy ny Real Estate orinasa.
Mampiasa plastika manana tombony maro tahaka ny maivana kokoa noho ny hazo sy metaly. Izany ihany koa dia manolotra ny tombontsoa miavaka ho recyclable.
Ny sasany amin'ireo vokatra tena fampiasa ao amin'ny fanorenana orinasa vokarina amin'ny alalan'ny tsindrona koronosy ahitana tafo ka manampatra, fitenenan-dratsy gaskets, tokotanin-tsambo fasteners, varavarankely sy ny varavarana toe singa etc.